Finfinnee/ Oromiyaa: Unkara fi Unkurama Mooraa PP Tibbanaa!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsFinfinnee/ Oromiyaa: Unkara fi Unkurama Mooraa PP Tibbanaa!!
Leelliftuun sirna naf*nyaa Paartiin Bilxiginna tibbana waa sadiin sardama unkura fi Unkurama siyaasaa keessa jirti. Irreecha, Murtee Uggura haaraa Ameerikaa fi waraana Tplf fi WBO. Irra aanufis shira adda addaa qopheessutti jirti.
1. Irreecha:- Irreechi akkuma Waayyaneef cinqii ture, sirna PP’fis cinqii hamaa dha. Gaafa Irreechaa Sabboonummaa Oromtichaatu sirna Gadaan dabaalamee akka biiftuutti Adunyaatti mul’ata. Caaccuu fi Kallachaatu dinqaa Malkaa ba’a. Sagalee Qeerroo fi Qarreetu dachee sochoosa. Urga’a Oromummaatu dachee aguuga. Guyyaan kun Oromoof adda. Guyyaa Gammachuu, Jaalala fi Tokkummaati. Warra lafa malee Oromoo fi sirna Oromoo hin barbaannef immoo gadda. Cinqii dha. Guyyaan kun PP’fis cinqii dha. Keessattu Sagaleen Qeerroo fi Qarree gaafasii lafa ittin mara. Iccitii fi gocha isaanii Adunyaaf saaxila.kanaaf isaanif guyyaa cinqiiti.
Ta’uus bara PP’n waa lama qopheeffatan.takkaa Irreecha banaa gochuun miseensota fi deeggartoota isaanii karaa adda addaan ijaarun,Sagalee Qeerroo fi Qarree fakkeessun of-dhaadhessuf Godina hanga Araddaatti qophii godhaa jiru. T-shirt fi baayinara Dr. Abiy fi Paartii isaanii leellisu, Irreecha waliin walitti hidhuun qopheessa jiru. Ijoollee Sabboonummaa qaban, gaafa Irreechaa hirmaatanii hirmaachisuu danda’an jedhanii yaadan,sababa gara garaatin hidhaatti galchu. Yeroo amma Magaalota Godina Shaggar kan akka Laga xaafoo laga daadhii, Sabbataa, Sulultaa fi Buraayyuu jalqabanii jiru. Kun tooftaa ittiin hirmaattoota sabboontota gaafa Irreechaa Iccitii fi gocha badaa pp sagalee dhan Adunyaatti saaxiluu danda’an jedhan dursanii Ukkamsu dha.
Karaan lammataa PP’n Sabboontota Irreecha irraa ittisuu karoorfatte, Ayyaanni warra Amantaa Orthodox gaafa 16/1/2014 Adda baabayii Masqalatti erga kabajamee booda, Murtee Irreechi banaa dha jedhu, sababoota gara garaa dhiyeessun, diraamaa gara garaa rakkoo nageenyaf yaaddoo dha jedhan hojjeechun cufaa gochuun akkuma bara darbeetti baajin akka kabajamu gochuu danda’u. Kanaaf Uummanni Oromoo asumaa achi mooraa pp keessa kun jiraachu beekee, karaa ittiin bara kana Irreeffatu ykn bara dhufu bilisan ba’ee irreeffatu yeroon malachuu qaba. Hanga Oromiyaan Garbummaa Jala Jirtutti, Diinarraa Waan Gaarii Hin Eegin.
2. Uggura Ameerikaa:- Irreecha Caalaa wanti tibbana pp cinqu,rakkoo lolli Kaabaa dhalcheen, Ameerikaan Uggura haaraa hojii irra olchuuf murteessu dha.Uggura amma kan adda godhu, list namootan as ba’uuf jiraachu dha. Uggurri akkasii mooraa pp marqa. Kaadireen akka wal-shakkitu fi wal-saaxiltu godha. Ani qulqulluu dha, Abaluutu Yakkamaa dha,ilaalcha jedhutu Masaraa dha hanga dirreetti diriira. Kun immoo kufaatii pp saffisiisa. Abdii Fulbaana gara dhumaa Mootummaa haaraa hundeessuu sanatti bishaan naqa. Bullee ilaalla.
3. Lola TPLF fi WBO:- Yaaddoon biraa pp lolli Kaabaa osoo hin xumuramin WBO’n Onoota fi Gandoota Oromiyaa hedduu bilisa baasuun toofta qabsoo “lolaa leenjisuu”jedhuun WBO’n qabatee as ba’uu dha. Lolli Kaabaa sadarkaa biyyaatti Kisaaraa guddaa geessisera. Lubbuun Lammilee hedduun itti badeera. Lammilee baay’een buqqa’aati fi beelaf saxilamanii jiru. Dhumaatin, beelli fi buqqaatin biyyaa hanga sadarkaa Idil-Adunyaa sirna irraatti rakkoo fida.biyyi dinagdee fi Siyaasan akka kuftu godha. Hunda caalaa pp miidha. Loltuun sirnaa gaafa Obboleessi fi Obboleettin isaa ajjeefaman, buqqa’an, beela’an gaaffii “Ani Eenyufan qabsa’a” jedhutu itti dhufa. Gaafas caasaan loltuu bittina’aa dhufa. Hunduu gara Uummatatti harkifata. Abjuun pp nuguusummaas abjuu ta’ee hafa. Kanaaf PP’n kumaatama leenjiftus yaaddoon mooraa pp raasaa jira.
Walumaagalatti biyyi tun rakkoo siyaasaa keessa jirti. Rakkoo siyaasaa immoo karaa siyaasaan malee qawween hiikuu hin danda’u.shirri lafa fi mallaqaan dhugaa dhoksuus laga hin ce’u. Furmaanni hireen Saba fi sablamoota akka kabajamuuf gochuu dha. Sanaaf immoo marii hunda hirmaachise, kan karaa lolaan qabsootti jirus, kan karaa tolaan qabsootti jirus hirmaachisuun yoo mariin sirnaa godhame qofa furmaanni dhufa. Adeemsi faallaa kanaa,Oromoo fi Tigree qofa osoo hin taane, saboonni cunqurfamoon hundi qabsoo tolaa irraa gara qawwee kaasutti ce’u. Ce’aniis jiru. Kanaaf PP’nis Irreechas, Ugguras, lolas sodaattee ilmaan hiyyeessaan taphachuurra karaa irraa maquutu isheef fala. Kanuma…
Girmaa Nagaasaa, 19/9/2021 Finfinnee
#Finfinnee fi magaalota Oromiyaa #OPDOtu gurgurate.
#Finfinnee fi magaalota Oromiyaa #OPDOtu gurgurate Waggaa 30n hardhaa duuba deebi'aa guddina magaalaa Finfinnee fi…
"Oromoo fi Finfinnee: Kurfii Miidiyaa Mootummaa Oromiyaa ofiin jedhuun
"Oromoo fi Finfinnee: Kurfii Miidiyaa Mootummaa Oromiyaa ofiin jedhuun kan darbu TV Oromiyaa ." Jigjiga…
ODUU Hatattama WBON finfinnee fi Oromiyaa marse Bilisummaa Oromoo gonfachisuf hasawa kuno Moha Oromo Abiy…